Enkosi uMartin ngokuqonda kwakho. Ndithenge incwadi yakho njengePDF kuba ndingazi nokuba ukuvalwa ngokupheleleyo kuzokuza na, kodwa okwangoku akukenzeki, thina “bantu balumkileyo” abangamaDatshi banokusiphatha “isivalo esivakalayo”. Ndisitsho nje ukuba bendikhe ndayiyeka kuba ndicinga ukuba akukho sizathu sokuba ubhale zonke iintlobo zabantu njengendawo ephikisayo, kodwa ngoku ndiyabona ukuba ubelungile kunokuba bendicinga ngeloxesha. Ukusukela oko uCharlie H ndaye ndarhwebesha kuyo yonke i-rithole, igama endikhetha ukungalisebenzisi kuba ndiyazi ukuba ngumzekeliso wento yokujonga abantu abahamba ngezomzimba (pedophile sodomy). Iyandothusa into yokuba bonke abantu behlabathi abanjengezimvu ezixhasayo bakhokelwa luloyiko ekutshixeni kunye nasekwenzeni intlalo. Njengoko ulwimi luhlobo lokupela, la magama mabini anoluhlu ngakumbi kunokuba unokucinga ekuqaleni. Isilogeni esimalunga nomgama obonakalayo kodwa ngokwasentlalweni kufutshane nento siyakuba nefuthe elahlukileyo. Kwaye ukutshixa, kunjalo, kubhekisele ekutshixeni komphefumlo wethu okanye kwiseli esisele sonke njengoko usibiza njalo.
U-Bill Wesick we-occultcience101, akasekho kwi-YT kodwa uluhlu lokudlala, kwaye ngoku kwi-ocs101ark.com unokwaziwa xa echaza ulwimi lwekhowudi yeSaturnal Luciferian yosulelwa yintsholongwane. Awuyi kuyibona de uyiqonde. Ngelishwa, i-99% yethu yegusha ayiboni.
Ndinesisu esibuhlungu xa ndicinga ngento elindele ubuntu, kodwa ndenze konke okusemandleni am ukuba ndiqhubeke nokudibana nekhowudi yam yentsusa. Andinanto ininzi yokwenza ...
Iindwendwe ezipheleleyo: 1.458.280
guppy op ICorona Crisis: Ingathabatha ukuya kwiminyaka emi-2 ukuya kweli-3 ukuphuma kokuvalelwa ngaphandle kokuba ulandelele kwangoko kunye neapps
SalmonInClick op ICorona Crisis: Ingathabatha ukuya kwiminyaka emi-2 ukuya kweli-3 ukuphuma kokuvalelwa ngaphandle kokuba ulandelele kwangoko kunye neapps